Kooxda Inter Milan oo guuldarro kala kulantay Sparta Prague kulan ka tirsan Europa League – Gool FM
Kooxda Inter Milan oo guuldarro kala kulantay Sparta Prague kulan ka tirsan Europa League
(Prague) 29 Sebt 2016 – Kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Waddanka Talyaaniga ayaa iyadoo ku ciyaaraysa 10 ciyaaryahan oo kaarka cas laga qaatay waxa ay guuldarro xanuun badan kala kulantay naadiga Sparta Prague oo ay marti u ahayd kulan ka tirsan Europa League.
Kulankan ayaa ka tirsanaa Guruubka K ee tartanka Europa League, kooxda Inter Milan ayaa la kulantay guuldarradii labaad oo xiriir ah tartankan.
Inter Milan ayaa goolasha lagu bilaabay qeybta hore waxaana labo gool oo deg deg ka kala dhaliyey daqiiqadihii 7’aad iyo 25’aad xiddiga Vaclav Kadlec, sidaas ayaana lagu kala nastay Inter Milan oo 2-0 looga gacan sarreeyey kulan.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Inter Milan ayaa hal gool iska soo guday waxaana 71’daqiiqo u dhaliyey Rodrigo Palacio, kaasoo kulanka ka dhigay 2-1 wali looga gacsan sarreeyey kooxdiisa.
Waxaana jabka ugu wayn uu soo gaaray Inter Milan markii uu kaarka cas ka qaatay 75’daqiiqo Andrea Ranocchia, iyadoo ay isku raaceen labo kaar oo kuwa digniinta ah, garoonkana laga saaray.
Mario Holek ayaana goolka saddexaad ugu shubay Inter Milan 76’daqiiqo, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-1 ay guul ku gaartay naadiga Sparta Prague.
Inter Milan ayaa iyadoo aan hal dhibic lahayn, isla markaana laga adkaaday labadii kulan ee ay ciyaartay tartankan kaalinta ugu hooseysa ka hoggaaminaysa guruubkeeda K.
Horseed oo dhib la’aan uga badisay kooxda heerka labaad ka ciyaarta ee Somali Fruit
Europa League: Man United oo guul ka gaartay kooxda Zorya, xilli Roma ay xaaqday Astra Giurgiu… + SAWIRRO